[must watch ] Ethiopia #OromoProtests Bilisummaan Qawween dhuftii Jedhan! -
Bilisummaan Qawween dhuftii Jedhan!
Vidiyoon kun bara 1995moota keessatti waraabame. Kan itti waraabames biyya Somaaliyaa magaala Moqdishoo natti fakkaata. Vidiyoo kana keessatti Goota Oromoo kanneen akka Waaqoo Guutuu fi Adam Jiloo keessattii argama. Yaada jeneraal Waaqo Guutuu bara sana ummata Oromoo dabarse ilaala! Wantii isaan bara sana dubbatan ammas bara kanattii raawwatama jira. Nutii Oromootni dheebuu bilisummaa qabna garuu namnii akka gootota keenya durii kana caala namnii bilisumma hawwu waan jiru natti hin fakkaatu. Dhiira kutataa kan akka saanii nuuf yaa baayyatu!! Jarrii utuu dheebuunsaani hin baafatin biyyeef lafee ta’an. Nutiis dheebuu gootota keenya kanneen akka Waaqoo Guutuu, Taaddasa Birruu fi kanneen biroo galman geessu kutannoo fi murannoo nubarbaachisa!
Vidiyoo kana kan qulqulina qabuu yoo of bira qabaattan adaraa nuuf erga. Nutii hamma dandeenyutti midiyaa garagaraa irratti labsinaa!!